mardi, 29 mars 2016 16:20
Ambatondrazaka : Mangatsiaka ny fankalazana ny 29 martsa 1947
Fanahiniana nohamaivanina ve sa inona no antony ? Ambatondrazaka izay manana ny mampiavaka azy raha ny tantaran’ny tolona 29 martsa 1947 no resahina. Nihazakazaka tao Moramanga avokoa ny mpitantana ny Faritra sy ny Prefektiora. Nalahelo ireo akanga sisa nanamborana, izay 37 mirahalahy sisa ao amin’ny distrikan’Ambatondrazaka ka 8 amin’ireo ihany no mahazo fanampiana avy amin’ny fanjakana. Hetahetan’ny filohan’ny fikambanana Rakotoson Jacques ny mba hanomezan’ny Fanjakana fanampiana azy 37 miralahy.
lundi, 28 mars 2016 22:32
Sambava : Ankizivavy 9 taona no nanjavona tsy hita hatramin'izao
Saika feno hipoka daholo ireo faritra malaza ao Sambava androany alatsinainin’ny Paka fa ny tany amin'ny « Plage » no tena betsaka mpisafidy. Indrisy anefa fa ankizivavy iray 9 taona no nanjavona tsy hita hatramin'izao raha vao avy nandro tamin'ny ranomasina. Edmira no anarany, ary any Ambariomihambana, 8km miala an’i Sambava no fihaviany. Nisy zazalahy sahabo ho 9 taona ihany koa no tsy nahatsiaro tena amin'ny hamamoana raha avy tany amin'ny « Plage » io hariva io ary mbola nahitana labiera amin’ny kapoaka teny an-tanany ; izy moa tsy niaraka tamin'ny Ray aman-dreniny. Tetsy andaniny koa dia nikarakara fety ho azy manokana tao Ambodisatrana ireo taranak’Andriana ao Sambava izay notarihin'ny Mpanjaka Andriamanjakarivo Saiid.
samedi, 26 mars 2016 22:17
Antsirabe : Raikitra ihany ny « Paska Bira 2016 »
Raikitra ny fety ho an’ny tananan’Antsirabe rehefa nifandrirarira tamina Tompon’andraikitry ny Serasera ny mpikarakara sy ny Kaominina. Niditra an-tsehatra tamin’ny fandaminana mihitsy moa ny olobe tao Vakinankaratra satria nahatsiaro ho voatohintohina ny andraikitr’izy ireo noho ny tsy fifazahoan-dresaka. Orinasa iray no tena nokendren’ilay Tompon’andraikitra noho ny resa-bola saingy niantraika tamin’ny mpikarakara hafa ihany koa ny vokany. Nilamina ihany moa izany izao.
jeudi, 24 mars 2016 12:04
Fisolokiana sy hosoka : Olona 6 voasambotra
Olona 06 no voasambotra ny andron’ny 18 Martsa 2016 teny Alakamisy Fenoarivo raha hanao ny asa ratsy fanaony no saron’ny Zandarimariam-pirenena avy ao amin’ny sampan-draharaha misahana ny heloka be vava eo anivon’ny zandarimariam-pirenena eny Fiadanana.Efa ny taona 2014 no nanao ny asa ratsiny ireto mpanao hosoka tra-tehaka ireto. Ny faritra Itaosy sy Alakamisy fenoarivo iny no tena lasibatra ary fisandohana tanin'olona sy fanaovana taratasy hosoka no tena ataony.
lundi, 21 mars 2016 17:23
Andro manerantany ho an'ny angano sy ny tononkalo
Notontosaina tetsy amin’ny tranombokim-pirenena Ampefiloha anio ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny angano sy ny tononkalo. Notronin’Andriamatoa ANDRIAMOSARISOA Jean Anicet, minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena izay mpisolo-toerana ny minisitry ny kolotsaina ary notronin'ireo mpanoratra maromaro avy eto an-toerana sy avy any amin’ny faritra ny lanonana.
samedi, 19 mars 2016 17:13
Fifaninanana ho an'ny Radio : « Haino amanjery mitondra fiovana »
Ny « Haino amanjery mitondra fiovana » dia tetikasa karakarain'ny « Coalition des Radios pour la Consolidation de la Paix » sy ny « Search for Common Ground » ary tohanan'ny masoivohon’ny Etazonia izay anasana ny radio rehetra na mpikambana na tsia eo anivon’ny fikambanana ny « Coalition des Radios » handray anjara. Izany dia natao mba ampitomboana ny fahaiza-manaon’ny radio, amolavolana sehatra ivondronan’ny radio ary ampiroboroboana ny fanaovan-gazety tompon’andraikitra eo amin’ny tontolon’ny haino-aman-jery Malagasy.
vendredi, 18 mars 2016 23:56
Mponin’Ambohibary Sambaina : Tsy nahita TVM hatramin’ny novambra 2015
Tapaka hatramin’ny voalohandohan’ny volana novambra 2015 ny TVM any amin’ny Kaominina Ambohibary sy Antanifotsy. Nambaran’ny lefitry ny Ben’ny tananan’Ambohibary fa nisy varatra nipoaka tany an-toerana tamin’izany ka ny fitaovana fanapariahana ny sary sy ny “Transfo” mitondra ny herinaratra no nirefotra ary nahatapaka ny fahitalavim-pirenena.
Fivorian'ny Ben'ny Tanana tany Antsirabe
jeudi, 17 mars 2016 21:11
Antsirabe : Nampiantrano ny fivorian’ireo Ben’ny tanàna an-tanan-dehibe
Tontosa tao Antsirabe androany alakamisy 17 marsa ny fivoriana voalohan’ireo Ben’ny tanàna an-tanan-dehibe maromaro nahitana ny Ben’ny tananan’Antsirabe mpampiantrano, Toamasina ary Mahajanga. Nahatonga solontena kosa ny Fianarantsoa, Toliara ary Antananarivo.
Soafeno Jean Moramody
mercredi, 16 mars 2016 22:04
Sary nomena, izay isaorana ny namana
Soafome Jean Moramody : Migadra ao Moramanga
Nanao dinika tamin'ny mpanao gazety ny Mpampanao Lalàna, ny mpitsara mpanao fanadihadiana tao Moramanga, niaraka tamin'ny Sekretera jeneralin'ny sendikan'ny mpitsara SMM androany tany Moramanga, mikasika ilay mpamily fiara tsy matahodalana nahafaty olona 5 tamin'ny 28 febroary 2016.
Fikambanana Gasy Masimandidy amin'ny Taniny
mercredi, 16 mars 2016 18:25
Fikambanana Gasy Masimandidy amin'ny Taniny : Manome fepotoana ho an'ny fitondrana
Ny Fikambanana Gasy Masimandidy amin'ny Taniny na GMT dia manome fepotoana ho an'ny fitondram-panjakana hatramin'ny 29 martsa hamahana ny olana misy eto amin'ny Firenena. Nampiaka–peo ireo fikambanana avy any Toamasina manoloana ny tsindry hazo lena ataon'ny mpitondra.